Ukusebenza neencwadana ezinokubhaliweyo zikaGoogle
Ngu-John Paul Mueller, uLuca Massaron
NjengakwiJupyter Notebook, incwadi yokubhalela yenza isiseko sokunxibelelana neGoogle Colaboratory. Ngapha koko, iColab yakhelwe kwiincwadana. Xa ubeka imouse kwiindawo ezithile Wamkelekile iphepha , ubona amathuba okunxibelelana nephepha ngokongeza ikhowudi okanye okubhaliweyo (onokuwasebenzisa kumanqaku njengoko kufuneka).
Olu ngeniso luyasebenza, ke unokusebenzisana nabo. Unako nokuhambisa iiseli ujikeleze kwaye ukope izinto eziphumela kwiGoogle Drayivu. Ewe kunjalo, ngelixa unxibelelana nephepha lokwamkela zombini kungalindelekanga kwaye kumnandi, eyona njongo yolwazi olungezantsi kukuchaza indlela yokunxibelelana neencwadana zeColab. Olu lwazi lulandelayo luchaza ukuba ungayenza njani imisebenzi esisiseko enxulumene notebook kunye neColab.
Ukwenza incwadana entsha kaGoogle eColoraboratory
Ukwenza incwadi yamanqaku entsha, khetha Ifayile → iNqaku elitsha lePython 3. Ubona incwadana entsha yePython 3 njengale iboniswe ngezantsi. Incwadana yokubhalela entsha ikhangeleka ifana, kodwa ayifani ncam naleyo ifunyenwe kwiNcwadana. Nangona kunjalo, yonke imisebenzi efanayo ikhona. Unokwenza incwadi encinci ye-Python 2 ukuba unqwenela njalo.
Yenza incwadana entsha yePython 3 usebenzisa iindlela ezifanayo njengesiqhelo.
Incwadana eboniswe apha ikuvumela ukuba utshintshe igama lefayile ngokunqakraza kuyo, njengoko usenza xa usebenza kwiNcwadana. Ezinye izinto zisebenza ngokwahlukileyo kodwa zibonelela ngeziphumo ezifanayo. Umzekelo, ukusebenzisa ikhowudi kwiseli ethile, ucofa ekunene kwisalathi kwicala lasekhohlo leso seli. Ngokuchasene neNcwadi yamanqaku, ukugxila kweseli akuguquki kwiseli elandelayo, ke kufuneka ukhethe iseli elandelayo ngokuthe ngqo okanye ucofe amaqhosha alandelayo eSeli okanye amaSeli angaphambili kwibar yesixhobo.
Ukuvula iincwadi zeencwadana ezikhoyo zikaGoogle
Ungavula iincwadi zamanqaku ezikhoyo ezikhoyo kugcino lwasekhaya, kuGoogle Drayivu, okanye kwiGitHub. Unokuvula nayiphi na imizekelo yeColab okanye ulayishe iifayile kwimithombo onokufikelela kuyo, njengedrive yenethiwekhi kwindlela yakho. Kuzo zonke iimeko, uqala ngokukhetha Ifayile → iNcwadi evulekileyo. Uyabona ibhokisi yencoko yababini apha.
I-diclofenac sodium 75mg iipilisi zeedr
Sebenzisa le bhokisi yencoko yababini ukuvula iincwadana ezikhoyo zeColab.
Imboniselo emiyo ibonisa zonke iifayile ozivulileyo kutsha nje, ngaphandle kwendawo. Iifayile zivela ngokulandelelana koonobumba. Ungalihluza inani lezinto ezibonisiweyo ngokuchwetheza umtya kwindawo yeFilter yeencwadana zamanqaku. Ngapha nangapha lolunye ukhetho lokuvula iincwadana.
Nokuba awungenanga, ungasakwazi ukufikelela kwiiprojekthi zomzekelo weColab. Ezi projekthi zikunceda uqonde iColab kodwa ayizukuvumela ukuba wenze nantoni na ngeeprojekthi zakho. Nangona kunjalo, usengazama uColab ngaphandle kokungena kuGoogle kuqala. Olu lwazi lulandelayo luxoxa ngezi nketho ngokweenkcukacha.
Sebenzisa iGoogle Drayivu yeencwadana ezikhoyo zeColab
I-Google Drayivu yindawo emiselweyo yemisebenzi emininzi kwiColab, kwaye unokuhlala ukhetha njengendawo oya kuyo. Xa usebenza neDrive, ubona uluhlu lweefayile ezifanayo nezo ziboniswe ngasentla. Ukuvula ifayile ethile, ucofa indawo yayo kwibhokisi yencoko. Ifayile ivula kwithebhu yangoku yesikhangeli sakho.
Sebenzisa i-GitHub yeencwadana ezikhoyo zeColab
Xa usebenza neGitHub, kufuneka kuqala unikeze indawo yekhowudi yemvelaphi kwi-intanethi. Indawo kufuneka yalathe kwiprojekthi yoluntu; ngekhe usebenzise iColab ukufikelela kwiiprojekthi zabucala.
Xa usebenzisa iGitHub, kufuneka unikeze indawo yekhowudi yomthombo.
Emva kokwenza uqhagamshelo kwiGitHub, ubona uluhlu ezimbini: zokugcina, ezizikhongozeli zekhowudi enxulumene neprojekthi ethile; kunye namasebe, ukumiliselwa okuthile kwekhowudi. Ukukhetha indawo yokugcina kunye nesebe libonisa uluhlu lweefayile zamanqaku onokuzilayisha kwiColab. Cofa nje kwikhonkco elifunekayo kwaye lilayisha ngokungathi usebenzisa iDrayivu kaGoogle.
Sebenzisa ukugcinwa kwendawo kweencwadana ezikhoyo zeColab
Ukuba ufuna ukusebenzisa imvelaphi enokukhutshelwa kuwo nawuphi na umthombo wasekhaya, ukhetha i Layisha ithebhu yebhokisi yencoko. Iziko liqhosha elinye, Khetha iFayile. Ukunqakraza eli qhosha kuvula ibhokisi evulekileyo yencoko yababini kwisikhangeli sakho. Ufumana ifayile ofuna ukuyilayisha, njengoko ubuqhele ukuvula nayiphi na ifayile.
Ukukhetha ifayile kwaye ucofe uvula ifayile kwifayile kuGoogle Drayivu. Ukuba wenza utshintsho kwifayile, olo tshintsho luyavela kuGoogle Drayivu, hayi kwidrive yakho yendawo. Kuxhomekeka kwisikhangeli sakho, uhlala ubona iwindow entsha ivuliwe ngekhowudi elayishiwe. Nangona kunjalo, unokubona ngokulula umyalezo wempumelelo, kwimeko apho kuya kufuneka ngoku uvule ifayile usebenzisa indlela efanayo naleyo ubuya kwenza ngayo xa usebenzisa iGoogle Drayivu. Ngamanye amaxesha, isikhangeli sakho siyabuza ukuba uyafuna ukushiya iphepha langoku. Kuya kufuneka uxelele isikhangeli ukuba senze njalo.
Ifayile → Layisha iNcwadi yamanqaku incwadana ikwafaka ifayile kuGoogle Drayivu. Ngapha koko, ukufaka incwadi yamanqaku kuyasebenza njengokufaka nayiphi na enye ifayile, kwaye ubona ibhokisi yencoko yababini. Ukuba ufuna ukulayisha ezinye iintlobo zeefayile, ukusebenzisa iFayile → yokulayisha iNcwadi yamanqaku inokubakho ngokukhawuleza.
Ukugcina iincwadana ezinemifanekiso kuGoogle
IColab ibonelela ngeendlela ezininzi zokugcina incwadana yamanqaku. Nangona kunjalo, akukho nanye kwezi ndlela zisebenza kunye nedrive yakho yobulali. Emva kokuba ulayishe umxholo ukusuka kwidrive yakho yangaphakathi ukuya kwiGoogle Drayivu okanye kwiGitHub, iColab ilawula umxholo kwilifu hayi kwidrive yendawo
Sebenzisa iDrive ukugcina iincwadana zeColab
Indawo emiselweyo yokugcina idatha yakho yiGoogle Drayivu. Xa ukhetha iFayile → Gcina, umxholo owenzileyo uya kulawulo lweengcambu kwiGoogle Drayivu yakho. Ukuba ufuna ukugcina umxholo kwifolda eyahlukileyo, kuya kufuneka ukhethe loo folda kuyo Google Drayivu .
i-preplus 27-1mg ithebhu zezithako
IColab ilandelela iinguqulelo zeprojekthi yakho njengoko ugcina ngokugcina. Nangona kunjalo, njengoko olu hlaziyo ludala, iColab iyazisusa. Ukugcina ingxelo engazukubudala, usebenzisa iFayile → Gcina kunye nokuPhononongwa komyalelo. Ukubona uhlaziyo lweprojekthi yakho, khetha Ifayile → Imbali yoHlaziyo. Uyabona imveliso eboniswe ngezantsi. Qaphela ukuba ukungena kokuqala kuphawulwe. Ungaphina amangeniso ngokujonga ungeniso kuluhlu lweMbali. Imbali yohlaziyo ikwabonisa umhla wokuguqulwa, owenze uhlaziyo, kunye nobungakanani befayile enesiphumo. Ungasebenzisa olu luhlu ukubuyisela uhlaziyo lwangaphambili okanye ukhuphele uhlaziyo kwidrive yendawo yakho.
IColab igcina imbali yohlaziyo lweprojekthi yakho.
Ungagcina ikopi yeprojekthi yakho ngokukhetha iFayile → Gcina ikopi kwiDrive. Ikopi yamkela igama Khuphela njengenxalenye yegama layo. Ewe unokuyinika elinye igama kamva. IColab igcina ikopi kwifolda yangoku yeGoogle Drayivu.
Sebenzisa iGitHub ukugcina iincwadana zeColab
GitHub ibonelela ngenye indlela kuGoogle Drayivu yokugcina umxholo. Inika indlela elungelelanisiweyo yokwabelana ngekhowudi ngenjongo yengxoxo, uphononongo kunye nokusasazwa.
Unokusebenzisa kuphela izinto zokugcina zoluntu xa usebenza neGitHub eColab, nangona iGitHub ikwaxhasa indawo yokugcina yabucala. Ukugcina ifayile kwiGitHub, khetha Ifayile → Gcina ikopi kwiGitHub. Ukuba awukasayini kwiGitHub, iColab ibonisa iwindow ecela ulwazi lwakho lokungena. Emva kokuba ungene, ubona ibhokisi yencoko yababini efana nale uyibona ingezantsi.
Sebenzisa i-GitHub kuthetha ukugcina idatha yakho kwindawo yokugcina izinto.
Qaphela ukuba le akhawunti ayinayo indawo yokugcina. Kuya kufuneka wenze indawo yokugcina entsha okanye ukhethe indawo esele ikho yokugcina idatha yakho. Emva kokuba ugcine ifayile, iya kubonakala kwindawo yokugcina izinto zeGitHub ozikhethile. Indawo yokugcina iya kubandakanya ikhonkco lokuvula idatha kwiColab ngokungagqibekanga, ngaphandle kokuba ukhetha ukungalibandakanyi eli nqaku.
Sebenzisa iGitHubGist ukugcina iincwadana zeColab
Usebenzisa iiGitHub Gists njengeendlela zokwabelana ngeefayile enye okanye ezinye izixhobo nabanye abantu. Abanye abantu bazisebenzisela iiprojekthi ezipheleleyo, kodwa umbono kukuba unoluvo ofuna ukwabelana ngalo-into engakhange yenziwe ngokupheleleyo kwaye engameli isicelo esisebenzisekayo. Unga funda ngakumbi malunga neGists apha .
NjengakwiGitHub, iiGists ziza zombini kunye nefom eyimfihlo. Ungafikelela kwii-Gists zikawonke-wonke nezimfihlo kwiColab, kodwa iColab igcina iifayile zakho ziyimfihlo. Ukugcina iprojekthi yakho yangoku njengoGist, ukhetha iFayile → Gcina ikopi njengeGitHub Gist. Ngokungafaniyo neGitHub, awudingi ukwenza indawo yokugcina izinto okanye wenze nantoni na entle kule meko. Ifayile igcina njengeGist ngaphandle komzamo ongaphezulu. Ungeniso oluneziphumo luhlala luqulathe uMboniso kwikhonkco lobumbano, njengoko kubonisiwe ngezantsi.
Sebenzisa iiGists ukugcina iifayile ezizezinye okanye ezinye izixhobo.
Khuphela iincwadana ezinemibala zikaGoogle
IColab ixhasa iindlela ezimbini zokukhuphela iincwadana kwi drive yakho yendawo: .ipynb iifayile (usebenzisa iFayile → Khuphela .ipynb) kunye .py iifayile (usebenzisa iFayile → Khuphela .py). Kuzo zombini ezi meko, ifayile iyavela kulawulo olukhuphelayo lokukhangela kwisikhangeli sakho; IColab ayinikezeli ngendlela yokukhuphela ifayile kulawulo oluthile.
indlela yokulayita ifleshi
Iziphumo ebezingalindelekanga zeberry
Zisetyenziselwa ntoni iipilisi ze-metronidazole
ukujonga njani ioyile
isisu sokukhulelwa kwe-adrenal fatigue
Isebenza njani i-amlodipine